Romance | Movie Guide !
Home! Action Animation Adventure Murder Thriller Comedy Drama Mystery Romance Sci-Fiction blog ! ရေးခဲ့သမျှ … Home \_ Romance Romance
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေရဲ့ ဘဝတန်ဖိုး . . . ဆက်ဆံရေး . . . အစရှိသည်တို့ကို " frequencies " တွေနဲ့သတ်မှတ်ထားပါတော့တယ်။ ထိုထဲမှာမှ Isaac-Newton လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် .. . . သူ့ကိုတော့ Zak ကို လူသိများကြပြီး သူကတော့ "Low frequency" နဲ့ မွေးဖွားလာသူဖြစ်ပြီး သူကတော့ ထိုအရာကို ပြောင်းလဲပစ်ချင်နေတာပါ။ အကြောင်းကတော့ "High frquency" ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Marie ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက စိတ်ဝင်တစားရှိနေလို့ပါ။ Zak ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ဆရာတွေကတော့ Zak နဲ့ Marie ဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ် . . သူတို့ငယ်စဉ်ဘဝတွေ့ဆုံတိုင်းမှာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ ဖြစ်ပျက်ကျန်ခဲ့တာပါပဲ။ Marie . . သူမကတော့ […]	Read more I Fine..Thank You Love You (2014)
Hollinaz | Comedy, Romance
Pleng ဟာ ချောမောလှပပြီး ငယ်ရွယ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဆရာမ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သင်တန်းမှာ လာတက်နေတဲ့ Pruek က Pleng ကို စိတ်ဝင်စားနေသလို Pleng ကလည်း သဘောကျနေပါတယ်။ Gym ကတော့ စက်ရုံက အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ရည်းစား ဂျပန်မလေး Kaya နဲ့ စကားပြောဖို့ အင်္ဂလိပ်လို မတတ်တာကြောင့် စွန့်ပစ်ခံရသူပါ။ Kaya က အင်္ဂလိပ်လို မတတ်တဲ့ Gym ကို ထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချိန်မှာ Pleng ကို အကူအညီ တောင်းပါတယ်။ သူတောင်းတဲ့ အကူအညီကတော့ သူပြောချင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားတွေကို အသံသွင်းထားပြီး Pleng က Gym ကို ဘာသာပြန်ပေးဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် […]	Read more Scarlet Innocence (2014)
Shim Hak-kyu ဟာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ စာသင်ကြားနေတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းမှာ sex ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သတင်းထွက်လာတာကြောင့် သူ့ကို နယ်မြို့လေးတစ်ခုကိုသွားပြီး ကိစ္စမဖြေရှင်းရသေးခင်အချိန်ထိ စာသွားသင်ခိုင်းခြင်းခံနေရပါတယ်။ အဲ့မြို့လေးမှာသူဟာ Deok-ee လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံမိပါတော့တယ်။ သူမကတော့ ပန်းခြံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး အပြစ်ကင်းချစ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ Deok-ee ဟာ စကားမပြောနိုင်တဲ့ သူ့မိခင်နဲ့ အတူနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ချစ်ကြိုက်မိပြီး အတူနေထိုင်လျက်ရှိနေကာ Deok-ee လည်း သူ့အမေရှိရာကို မပြန်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ထိုအချိန်မှာပဲ Shim Hak-kyu ဟာ သူ့တက္ကသိုလ်ကို ပြန်သွားရဖို့ရှိလာပါတော့တယ်။ ထို့ကြောင့်သူဟာ Deok-ee ကို ထားခဲ့ရတော့မှာဖြစ်ပြီး Deok-ee မှာ ကိုယ်ဝန်လည်းရှိနေပြန်ပါတော့တယ်။ Shim Hak-kyu ဟာ လူပျိုလူလွတ်တစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ မိန်းမရှိကာ သမီးလေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်။ ထို့ကြောင့် Shim Hak-kyu ဟာ Deok-ee ကိုယ်ဝန်ကိုဖျက်ချခိုင်းခဲ့ပါတော့တယ်။ Deok-ee ဟာ Shim Hak-kyu ကို ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် Shim Hak-kyu […]	Read more My Super Ex-Girlfriend (2006)
Hollinaz | Comedy, Romance, Sci-Fiction
နယူးယောက်မြို့ကြီးမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒုစရိုက်မှုတွေ အန္တရာယ်တွေကို ကာကွယ်နေတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ရှိနေပါတယ်။ G-Girl လို့ လူသိများတဲ့ ဒီမိန်းကလေးဟာ ဘယ်လိုကနေ ဒီအစွမ်းသတ္တိတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားလဲ မသိပေမယ့် သာမန်ထက် ပိုမိုထူးခြားတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ Matt Saunders ဟာ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ ဖြစ်ပြီး သူနဲ့ ဘော်ဒါ Vaughn Haige တို့ဟာ ရည်းစားရရှိရေး အသည်းအသန် လုံးပမ်းနေကြသူတွေပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ ရထားစီးရင် အူကြောင်ကြောင် ဂေါက်တောက်တော် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို လူတစ်ယောက်က လုပြေးသွားတာကြောင့် Matt က လိုက်ဖမ်းပေးပါတယ်။ တလွဲတချော်တွေ ဖြစ်သွားပေမယ့် Matt ဟာ Jenny Johnson ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ သူရဲကောင်း […]	Read more For Love or Money (2014)
ကရကဋ် | Romance
Xing Lu ဟာချောမောလှပတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့မှာ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မထင်မှတ်ပဲ သူ့ချစ်သူဟာ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ သူဌေးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်သွားတဲ့ အတွက် Xing Lu ဟာ အသည်းကွဲပြီး ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့်သူဟာ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ တိုက်ပေါ်ကနေ ခုန်ချဖို့အလုပ်မှာ Xu Chengxun ဟာ သွားရောက်ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားရာက နှစ်ယောက်စလုံး တိုက်ပေါ်က ပြုတ်ကျခဲ့ပေမယ့် မီးသတ်သမားတွေက အောက်ဘက်မှာ အသက်ကယ်ပစ္စည်းတွေ ထားထားတာကြောင့် အသက်ချမ်းသာရာ ရခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံမှုဟာ မထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုမဟုတ်ခဲ့ပဲ အီတလီနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပြီး Xu Chengxun ကားနဲ့ Xing Lu ကို တိုက်မိသွားသလိုဖြစ်ရာကနေမှတစ်ဆင့် Xu Chengxun ဟာ Xing Lu ကို မြင်မြင်ချင်းမှာပဲ နှစ်သက်သွားပါတော့တယ်။ Xing Lu ဟာ ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ထားပြီး Xu Chengxun ကတော့ ပန်းချီဆွဲတာ ဝါသနာပါတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ကားမောင်းရတာလဲ ဝါသနာပါပါတယ်။ Xu Chengxun ဟာ Xing […]	Read more Movie Guide ! - Close